Eraybixinta maamulka: Farqiga u dhexeeya ''Ku sime iyo sii haye'' - Caasimada Online
Home Warar Eraybixinta maamulka: Farqiga u dhexeeya ”Ku sime iyo sii haye”
Eraybixinta maamulka: Farqiga u dhexeeya ”Ku sime iyo sii haye”
Marar badan ayaan arkay iyada oo la isku khaldayo Ku Sime iyo Sii Haye ama loo adeegsanayo sidii in ay isku macno yihiin oo midba marka la doono la adeegsan karo.
Farqi ayaa u dhexeeya labada.
Ku-sime ama Ku-sinto: waa mas’uul si ku meel gaar ah u haya xil inta uu qofkii ku magacawnaa uu Xafiiska ku soo laabanayo. Waxaana xilka u dhiiba isla qofka jagada haya ee maqnaan doona safar, fasax ama xanuun awgiis.
Sii-haye ama Sii-hayso: waa mas’uul haya xil aan qofna ku magacawneyn muddada uu heyn doonana aan la aqoon. Waayo waa xil qofkii hayay uu dhintay, xilka laga qaaday oo aanuu ku soo noqoneyn ama uu is-casilay.
Si kale haddii aan u dhigo, Ku-sime waa qof xilka ku simaya qofkii xilka hayay oo maqan. Waa sida Ku-simaha Agaasimaha.
Sii-haye waa qof xil hadda bannaan sii heyn doona ilaa laga magacaabo ama laga doorto qofkii xilkaa qaban lahaa. Waa sida Sii-hayaha Agaasimaha ama Agaasinka.
Eraybixinta maamulka oo si sax ah loo adeegsado waxay qayb ka noqon kartaa kobcinta af Soomaaliga maamulka.